Somaliland: Ganacsade ku dhintay rasaas uu askari ku furay wafdi wasiir horkacayayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Marxuum Xuseen Maxamuud Cawaale (Gacma-dheere), oo ka mid ahaa ganacsatada xoolaha dhoofisa ayaa xalay u geeriyooday rasaas uu ku riday askari ilaalinayay bar kaantarool oo ku taala tuulada Qoton.
Marxuumka oo ka mid ahaa wafti uu hogaaminayay Wasiirka Caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed ayaa la sheegayaa in gaarigii ay la socdeen oo ka dambeeyay waftigaasi uu rasaas ku furay askarigu, halkaas uu ku qurbaxay Xuseen Maxamuud Cawaale (Gacmadheere), Allaha u naxariistee.
Dadka ka hadlay geerida marxuumka waxa ka mid ahaa Wasiirka Shaqada Dr. Cabdi Awdaahir Cali oo sheegay in marxuumka gacan ka xaq darani dishay.
“Waxa galabta gacan ka xaqdaran xabad ku dhufatay oo geeriyooday Alle ha u naxariistee ganacsadihii weynaa ee Reer Somaliland Xuseen Maxamuud Cawaale (Gacmadheere). Wuxuu ahaa oday weyn oo ka baxay dalka oo ka soo qaybqaatay marxaladihii kala duwanaa ee dalku soo maray” ayuu yiri Cabdi Awdaahir.
Dhanka kale Madaxweynaha Somaliland ayaa Tacsi u diray Ehelka, qaraabada iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Marxuum Gacmadheere “Madaxweynaha Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu tacsi u dirayaa, Qoyskii, Ehelkii, Qaraabadii, Asxaabtii iyo Shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariitee Marxuum Xuseen Maxamuud Cawaale (Gacmadheere) oo ku geeriyooday Maanta 22/03/2015, gobolka daadmadheedh, kana mid ahaa Odayaashii ka soo shaqeeyey nabadayntii iyo dib u dhiskii dalka, sidoo kalena ka mid ahaa ganacsatada dalka ee xoolaha dhoofiya.
Gudoomiyaha Aqalka Wakiilada iyo Waddani Cabdiraxmaan Cirro, ayaa sidoo kale ka hadlay Geerida Ganacsade Gacmo Dheere, waxeyna Alle uga baryeen inuu naxariistiisa ka waraabiyo.